I-Apple ihlawule malunga nokuhlala eSweden | Ndisuka mac
Khange sithethe ngezicwangciso zokwandiswa kweApple Pay kwihlabathi liphela iinyanga ezimbalwa, kodwa kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, kubonakala ngathi intshukumo yale teknoloji yokuhlawula iApple ibonisa iimpawu zobomi kwakhona. Izolo ndikuxelele ngezicwangciso zokwandisa iApple Pay eIndiya, njengoko kuchaziwe nguEddy Cue kuhambo lwakhe lokugqibela kweli.
Namhlanje lithuba leSweden, ilizwe apho, ngokwewebhusayithi yeMac Pro, iApple Pay iza kuba ngumhlaba Kwiveki ezayo ukusuka kwibhanki enye yeNordea, kumbutho okhomba kukhethekileyo njengoko kwenzekile ngeApple Pay eSpain, ukusukela kunyaka wayo wokuqala, kuphela yiBanco Santander ehambisanayo kwicandelo lebhanki.
Ngokwesi sixhobo, iNordea iya kuba yibhanki yokuqala ukubonelela ngeApple Pay kweli lizwe, kwaye iyakwenza njalo ukusukela nge-24 ezayo ka-Okthobha. Okwangoku ukupapashwa akukwazanga ukunika ulwazi oluthe kratya malunga nayo. INordea yenye yeebhanki ezinkulu elizweni, ngenxa yokufumana kunye / okanye ukudityaniswa kweebhanki ezivela eSweden, eFinland, eDenmark naseNorugea. Ngokwenyani Ineportfolio yabathengi yabasebenzisi abazizigidi ezili-11.
Ngaphandle kwenyani yokuba iSweden lelinye lawona mazwe ahambele phambili kwicandelo lokuhlawulwa kweselfowuni, kuyamangalisa ngakumbi ukuba iApple ithathe ixesha elide ukufikelela kwisivumelwano ukuze ikwazi ukubonelela ngendlela yayo yokuhlawula ngombane. Ngokwezibalo zonyaka ophelileyo, abathathu kubemi abane belizwe basebenzisa imihla ngemihla iinkqubo zokuhlawula. Okwangoku eSweden, ziipesenti ezingama-20 kuphela zentengiselwano ezenziwa ngemali ezinkozo kwaye ngaphezulu kwesiqingatha seebhanki elizweni alwamkeli ntlawulo okanye idiphozithi zemali eziofisini zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ihlawule malunga nokuhlala eSweden
Sele siyi-Apple Pay ngeLa Caixa de Barcelona ukusukela namhlanje eSpain
I-LAER, ityala lebhetri eliza kuhlawula zonke izixhobo zakho: iMacBook kunye ne-iPhone